Wararka - Sidee Fette Compacting China u taageertaa dagaalka ka dhanka ah COVID-19
Sidee Fette Compacting China u taageertaa dagaalka ka dhanka ah COVID-19
Cudurka faafa ee caalamiga ah ee COVID-19 wuxuu bedelay diirada loosaaray kahortaga faafida iyo xakameynta infekshinka dhamaan meelaha aduunka. WHO wax dadaal ah ugama tageyso inay ugu baaqdo quruumaha oo dhan inay xoojiso midnimada iyo iskaashiga la dagaallanka cudurka faafa ee faafa. Dunida sayniska waxay raadinayeen toddobaadyo tallaal coronavirus, iyagoo sii wadaya baaritaanada ku saabsan sida loo daaweeyo bukaanka. Nidaamkan caalamiga ah wuxuu si weyn u dardargeliyay horumarinta daawooyinka daweynta ee daaweynta cudurka COVID-19, oo lagu bartilmaameedsanayo hagaajinta heerka daaweynta iyo in la yareeyo tirada dhimashada mudnaanta koowaad.
Zhejiang HISUN Pharmaceutical Co., Ltd. waa mid ka mid ah shirkadaha wax soo saarka dawooyinka ee Shiinaha. Intii lagu gudajiray tijaabooyinka bukaan socod eegtada wajiga hore ee cudurka faafa ee ka dilaacay Shiinaha, daawada HISUN ee dawada OSD ee FAVIPIRAVIR waxay muujisay saameyn togan ee daaweynta bukaanada iyo waxtarka caafimaad ee wanaagsan oo aan laheyn wax saameyn ah oo weyn. Wakiilka fayraska kahortaga fayraska ee 'FAVIPIRAVIR', oo asal ahaan loogu tala galay daaweynta hargabka, ayaa loo ansixiyay soosaarida iyo suuqgeynta Japan bishii Maarso 2014 iyadoo la adeegsanayo magaca trainka ee AVIGAN horeyba. Tijaabooyinka caafimaad ee Shenzhen iyo Wuhan waxay muujiyeen in FAVIPIRAVIR ay gacan ka geysan karto yareynta waqtiga soo kabashada xaaladaha khafiifka ah iyo kuwa dhexe ee daran ee COVID-19. Intaas waxaa sii dheer, saameyn wanaagsan oo lagu gaabiyo muddada qandhada ee bukaannada cudurka qaba ayaa la arkay. Maamulka Cunnada iyo Dawooyinka ee Shiinaha CFDA ayaa si rasmi ah u ansixiyay FAVIPIRAVIR Febraayo 15, 2020. Daroogada ugu horeysa ee waxtarka u leh daaweynta ee ka dhanka ah COVID-19 oo ay ansixisay CFDA inta lagu guda jiro faafida cudurka, daawada waxaa lagula talinayaa barnaamijyada daaweynta hagida ee Shiinaha. Xitaa haddii aysan si rasmi ah u ansixin hay'adaha caafimaadka ee Yurub ama Mareykanka, iyo maqnaanshaha tallaal wax ku ool ah oo si ballaaran loo isticmaalo oo lagu daaweeyo COVID-19 meel kasta oo adduunka ah, sidoo kale waddamada sida Talyaanigu waxay go'aansadeen inay oggolaadaan isticmaalka daroogada.
Xaaladaha faafa, dejinta waxsoosaarka tirada badan wuxuu noqday tartan ka dhan ah saacadda kadib ansixinta rasmiga ah ee CFDA. Waqtiga loo baahan yahay in suuqa la galiyo, HISUN iyo mas'uuliyiinta ku lugta leh waxay bilaabeen dadaallo wada jir ah, si loo hubiyo soo saarista FAVIPIRAVIR oo leh tayada iyo badbaadada daawada loo baahan yahay. Guddi gaar ah oo heer sare ah oo ka kooban kormeerka suuqa maxalliga ah Maamulayaasha, kormeerayaasha GMP iyo khubaro ka tirsan HISUN ayaa loo sameeyay inay la socdaan oo ay kormeeraan dhammaan geeddi-socodka ugu horreeya ee soosaarida kiniiniga FAVIPIRAVIR ee laga soo saaray alaabta ceeriin ilaa daawada la dhammeeyay.
Kooxda hawsha waxay shaqeeyeen saacad kasta si ay u hagaan wax soo saarka caadiga ah ee daroogada. Khubarada dawooyinka ee Hisun waxay si dhow ula shaqeeyeen kormeerayaasha dawada 24/7, halka wali caqabado badan ay tahay inay ka gudbaan, sida xakamaynta cudurada faafa ee laxiriira xakamaynta taraafikada iyo shaqaale yaraanta. Ka dib markii wax soo saarkeedii ugu horreeyay uu bilaabmay Febraayo 16, 22-kii kartoon ee ugu horreeyay ee gaadiidka ee FAVIPIRAVIR ayaa la dhammeeyay Febraayo 18, oo loogu talagalay isbitaallada Wuhan isla markaana gacan ka geysanaya daaweynta COVID-19 ee xudunta Shiinaha ee faafitaanka cudurka.
Sida laga soo xigtay Li Yue, Madaxa Waaxda Sayniska Caafimaadka iyo Maareeyaha Guud, Zhejiang Hisun Pharmaceutical ayaa taageero dawooyin ah siiyay dalal badan ka dib markii uu ku faafay caabuqa faafa adduunka, oo ay isku dubariday Mashruuca Kahortaga iyo Xakamaynta Wadajirka ah ee Golaha Gobolka Shiinaha. muddo gaaban gudaheeda, Hisun wuxuu aqoonsi sare ka helay hay'adda P.RC. Golaha Gobolka.
Kadib guulihii ugu horreeyay ee horumarsan, waxay noqotay wax iska cad, in soosaarka dhabta ah ee wax soo saarka FAVIPIRAVIR uu aad uga hooseyn lahaa si loo daboolo baahida maxalliga ah iyo tan caalamiga ah ee daaweynta bukaanka COVID-19. Iyada oo leh taxane 8 P ah iyo mid 102i ah oo shaybaadh ah oo ku shaqeeya dhirtooda OSD, ayay HISUN horeba ugu qanacday oo ay aqoon u lahayd farsamada Fet Compacting. Bartilmaameedka si kor loogu qaado wax soo saarkooda iyo in lagu hagaajiyo waxtarka ereyada ugu gaaban, HISUN waxay la xiriirtay Fette Compacting China si ay u hesho xal ku haboon oo dhaqangal deg deg ah leh. Hawsha caqabadda ahi waxay ahayd inay soo siiso kiniin cusub oo dheeraad ah oo loo yaqaan 'P2020 Fette Compacting' oo loogu talagalay soosaarida kiniiniga FAVIRIPAVIR oo leh SAT hal bil gudaheed.
Kooxda Fette Compacting China Management Team, shaki kuma jirin in caqabadda ay ahayd in la barto, iyada oo la tixgelinayo himilada sare ee xaaladda faafa ee halista ah. Xitaa iyada oo xaalad caadi ah ay ku dhowdahay "howl aan macquul ahayn". Intaa waxaa sii dheer, waqtigan wax walba way ka fogaadeen sidii caadiga ahayd:
Fette Compacting China ayaa mar kale dib u bilawday hawlgalkeeda 25 maalmood ka dib markay ahayd Febraayo 18, 2020 laga bilaabo xakamaynta cudurrada faafa ee la xidhiidha joojinta shaqada ballaaran ee Shiinaha. Intii aan hawsha ka bilaabayey iyadoo laga hortagayo cudurada faafa iyo talaabooyinka xakamaynta si guul leh, silsiladda sahayda ee deegaanka ayaan wali si buuxda u shaqeyn. Xayiraadaha socdaalka ee gudaha ayaa wali jira, oo u baahan isgaarsiinta fog iyo adeegga gurmadka macaamiisha. Gaadiidka soo galaya soo dejinta qeybaha wax soo saarka mashiinka ee muhiimka ah ee Jarmalka waxaa si aad ah u dhibay awoodaha hawo la'aanta aadka u yareysay iyo hakinta gaadiidka tareenka.
Ka dib falanqeyn deg deg ah oo ku saabsan dhammaan xulashooyinka iyo qaybaha wax soo saarka 'helitaankooda, Fette Compacting China Management Team waxay qeexday baahida ka timid Hisun Pharmaceutical inay tahay mudnaanta koowaad. Bishii Maarso 23, 2020 ballanqaadka waxaa loo sameeyay HISUN si loo keeno mashiinka cusub ee P 2020 waqtiga ugu yar ee suuragalka ah si kasta ha noqotee.
Xaaladda wax soo saar ee mashiinka ayaa la kormeeray 24/7, iyada oo la dhigayo "hal-ilaa-hal" mabda'a dabagalka ee loogu talagalay xaaladda wax soo saar, hagaajinta awoodda wax soo saar iyo waxtarka hawlgalka. Diiraddu waxay saarneyd sugidda waqtiga adag, iyadoo la ilaalinayo tayo sare ee wax soo saarka mashiinka.
Sababtoo ah tallaabooyinka dhammaystiran iyo kormeerka dhow, waqtiga wax-soo-saarka caadiga ah ee daabacaadda kiniiniga cusub ee P2020 ee bilaha 3-4 ayaa loo dhimay oo keliya toddobaadyada 2, oo si buuxda u taageeraya dhammaan waaxyaha iyo kheyraadka Fette Compacting China. Caqabada xigta ee laga gudbo waxay ahayd siyaasadaha kahortaga cudurrada iyo xayiraadaha safarka ee wali jiray waqtigan, taasoo ka horjoogsanaysa wakiillada macaamiisha inay baaraan mashiinka Fet Compacting China Competence Center kahor intaanay keenin sidii caadiga ahayd. Xaaladdaas, FAT ayaa lagu arkay adeegga aqbalaadda fiidiyowga ee khadka tooska ah ee kooxda kormeerka HISUN. Tan, dhammaan tijaabooyinka iyo hagaajinta saxafadda kiniinka iyo unugyada durugsan waxaa lagu fuliyay si adag iyadoo la raacayo heerarka baruurta iyo shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha loo habeeyay, si aad u hufan.
Kadib dib uhabeynta caadiga ah iyo nadiifinta mashiinka, dhamaan qeybaha waa la jeermiyay oo waxaa lagu buuxiyay heerarka sare, Fette Compacting waxay taageertaa si loo hubiyo ilaalinta ugu weyn ee caafimaadka iyo badbaadada ee kahortaga iyo xakamaynta cudurka, oo ay kujiraan dukumiintiyada dhamaan talaabooyinka.
Dhanka kale, xayiraadaha safarka dadweynaha ayaa qeyb ahaan laga nastay sababo laxiriira xasilloonida horumarka cudurka faafa ee gobollada Jiangsu iyo Zhejiang ee dariska ah. Markii mashiinka la yimid dhirta HISUN ee ku taal Taizhou (Gobolka Zhejiang), injineerada Fette Compacting Engineers ayaa ku soo yaacay goobta si ay ugu rakibaan P2020 cusub qolka saxaafada ee dib loo dhisay April 3.rd 2020. Kadib markii la dhameeyay shaqooyinkii haraaga ahaa ee ku jiray aaga kiniiniga ee kuxiran dhirta HISUN, kooxda adeega macaamiisha ee Fette Compacting waxay bilaabeen adeeg tayo sare leh oo looga baahan yahay ka saarida, tijaabinta iyo bilaabida P2020 cusub abril 18, 2020 Bishii Abriil 20, 2020, SAT iyo dhammaan tababbarkii loogu talagalay daabacaadda kiniiniga cusub ee leh aagagga oo dhan ayaa si buuxda loogu dhammaystiray si waafaqsan shuruudaha HISUN. Tani waxay awood u siisay macmiilka inuu ku fuliyo inta ka hartay Aqoonta Wax Soosaarka (PQ) waqtigeeda, si uu u bilaabo soosaarida kiniiniga FAVIPIRAVIR ee ganacsiga ee loo keenay P2020 cusub ee la keenay bishii Abriil 2020 weli.
Laga bilaabo gorgortanka Mashiinka Isukeenista Mashiinka 'P2020' bisha Maarso 23rd, 2020, waxay qaadatay wax kayar hal bil in ladhameeyo soosaarida Mashiinka, gaarsiinta, SAT iyo Tababarida saxaafada cusub ee P2020 iyo dhamaan qalabka durugsan ee wax soo saarka FAVIPIRAVIR ee warshada dawooyinka ee HISUN
Xaqiiqdii waa kiis gaar ah waqti aad u qaas ah oo adduunka oo dhan ku faafaya COVID-19. Laakiin waxay u noqon kartaa tusaale aad u wanaagsan sida macaamiisha sare u saaraan, ruuxda guud, iyo iskaashiga dhow ee dhinacyada oo dhan uga guuleysan karaan xitaa caqabadaha ugu waaweyn! Intaas waxaa sii dheer, qof kasta oo ku lug leh mashruuca wuxuu ku kasbaday dhiirigelin sare guushaan cajiibka ah iyo wax ku biirinta dagaalka guuldarada ee COVID-19.
Waqtiga boostada: Oct-14-2020